Sheekada 3M - Ka unkankii 3m gudaha Saint Paul | Saint Paul Historical
Ka unkankii 3m gudaha Saint Paul
Laga bilaabo Hal wax soo saar ilaa Kumanyaal
3M waxay lahayd bilowgeedii 1902 goob yar oo ku taala waqooyiga Minnesota. 3m xarumaheeda Saint Paul waxay kobceen si ay u noqdaan wadnaha shirkada wayn intiii u dhexaysay 1910 ilaa 1962.
Waxaa la aasaasay 1902, Warshadaynta iyo Macdanta Minnensto waxay ahayd ahayd shirkad macdanta qoda oo daalaa dhacaysa oo ku taala Two Harbors, Minnesota.
Waxay noqotay shirkada warshadaysa warqadda baaleeska oo halagamaysa gudaha Duluth sanadkii 1905 oo Edgar Ober uu yahay maamulaheeda. Xataa markaa waxay lahayd himilooyinka qaranka, kana dhisaysa xafiis Chicago.
Maalgeliyaha Saint Paul Lucius P. Ordway ayaa bixiyay lacagta dib loogu dejinaayo shirkada p Saint Paul sanadkii 1910.
Saint Paul waxay siisay helitaan wanaagsan oo alaabta, saaka iyo suuqyada kale ah, sababtoo ah isku xidhka khadka tareenka.
Ordway waxa uu doortay goob ku xigta Chicago, Saint Paul, Minneapolis iyo khadadka tareenka Omaha ee East Side, oo u dhow warshadaha. Goobaha la dego iyo ganacsigu way dhawaayeen.
Xaafadu waxay bixisay il diyaar ah oo shaqaale ah oo waxay ku dhowayd xafiisyada Ordway ee suuqa hoose ee Saint Paul markaas waxa uu isha ku hayn karaayay maalgelinta.
William L. McKnight waxaa la shaqaaleeyay 1907. Archibald G. Bush waxaa la shaqaaleeyay 1909. Waxay bilaabeen iib casri iyo xeerarka maaraynta caawiyay si shirkadu u noqoto mid macaash badan. Waxay bilowday bixinta saamiyada macaashka inay siiso saamiilayaasha 1916.
Warqadda baalaysku waxay ahayd alaabtii 3M soo saarto ee u horaysay iyo isha ganacsiyada kala duwan ee baaleesyada ee kobcaya. Markii dhismaha 47 la dhammeeyay 1955, waxay ahayd warshada baaleesyada ugu wayn adduunka.
3M guusheedu waxa uu salka ku hayay cilmi baadhida, u daacad ahaanshaha casriyaynta, iyo wax ka barashadda guul darrada. Markii wax soo saarkii warqadda baaleeska ee u horaysay ay guul daraysatay, shirkadu waxay heshay isha dhibaatadu ka imanayso oo waxay dhistay shaybaadhka cilmi baadhida si loogu baadho oo wax loogu barto. Adkaynta cilmi baadhida iyo tijaabada shirkada oo dhan had iyo jeer waxay ahayd aasaaska koboca shirkada.
3M Saint Paul Xafiiska iyo Warshada, 1958: 1958, xarunta Saint Paul 3M waxay u balaadhatay cabbirkeeda ugu wayn oo leh 40 dhisme oo loogu talo galay cilmi baadhida alaabta, horumarinta, warshadaynta, suuq gaynta iyo adeegyada maamuleed. ~ Source: Minnesota Historical Society
Xafiiska Two Harbors ~ Source: Minnesota Historical Society
William L. McKnight (midig) la jooga C. C. Allis in 1916. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dhismaha 47 ~ Source: Minnesota Historical Society
Riiboonada iyo Qurxinta ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Sheekada 3M
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/397.